(Emelitere ikpeazụ On: 01/10/2021)
The mara mma ugwu Tuscany ozuzo a na anya-akụta nnukwu ụlọ na pụrụ iche na ije. Onye nwe ya na narị afọ nke 19 chọrọ imezigharị ya na mmetụta Oriental. Yabụ, o nyere ya a flair na ọ dịghị ndị ọzọ Italian nnukwu ụlọ nwere ike dakọtara.
Wuru na-10th narị afọ, Valenzano nnukwu ụlọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie fairytale castles ka ha guzo na Italy. Taa ọ bụ ka na-dị nnọọ ka nnukwu na ebube dị ka ọ bụ mgbe ahụ. Otú ọ dị, kama na-eje ozi dị ka onye na-eche nche, a nnukwu ụlọ bụ now a hotel, zuru ezu na ogige tenis na klọb golf.
N'ihi na ihe niile na nkà na ndị hụrụ n'etiti ndị njem, Montegufoni ga-a na-adọrọ mmasị na-aga. Ọ bụ ebe obibi nke ndị a ma ama Room nke Masks, nwere Nke Gino Severini mara mma frescoes. Ọzọkwa, ya anya nnọọ pụtara, na ọ bụ ebe onye ọ bụla nwere ike na-enwe.